I-Sun City Cabanas Hhotela - Indawo yokuhlala
I Hhotela ye-Cabanas, e- Sun City
I-Cabanas Hotel eSun City iphelele izivakashi ezihamba nezingane, zifuna indawo yokuhlala enobungane eSun City.
E-Cabanas Hotel eSun City, indawo yokuhlala kuhlala kwelinye lama-suites angu-380 ahlukaniswe ngama-suite angu-201 ajwayelekile omndeni, ama-twite ama-twite angu-120 ajwayelekile, ama-suites angu-32 omndeni, ama-suites ajwayelekile angu-24 ahlangene nama-suites amathathu afinyelelekayo. Amakamelo ehhotela lakho lase-Sun City anezihlobiso ezihlotshisiwe kanye nomoya okhululekile. Isidlo sasekuseni se-Buffet sinikezwa kwi-Palm Terrace Restaurant nsuku zonke.
Igumbi elijwayelekile lababili
I-Standard Twin Rooms e-Cabanas iza nemibhede emibili elala abantu ababili. Imibhede emibili ingafakwa ndawonye bese iguqulwa ibe yimbhede emibili ngesicelo.
I-en-suite yokugezela ihamba ngewashi kuphela. Izici ezijwayelekile zihlanganisa isimo se-air, i-screen-screen TV eneziteshi zesathelayithi, idesksi, izindawo zokwakheka itiye kanye nokwenza ikhofi kanye nesiqandisini esincane.
Igumbi lomndeni elijwayelekile
Igumbi lomndeni elijwayelekile lilala nabantu abadala ababili nabantwana ababili abaneemibhede emibili kanye nombhede wokulala. Izingane ezineminyaka engu-12 nangaphansi (ubuningi 2) ukwabelana nabantu abadala ababili bahlala mahhala emakamelweni omndeni.
Igumbi elikhululekile linemimoya yomoya, i-screen-screen TV eneziteshi ze-satellites, idesksi, izindawo zokwakheka itiye kanye nokwenza ikhofi kanye neqabunga elincane.
Kukhona i-en-suite yangasese ene-shower kuphela. Amakhadi namabhede amabili atholakalayo ngesicelo (ngokuya kokutholakala).
Igumbi Lomndeni LaseLwandle Lasezingeni eliphezulu
Jabulela imibono ye-Waterworld Lake kusukela ebhodini leGumbi Lwasekhaya LaseLwandle Oluphezulu eSun City Cabanas.
Igumbi lilala nabantu abadala ababili nabantwana ababili, ngemibhede emibili kanye nombhede wokulala nabantwana abangaphansi kweminyaka engu-12 ababelana nabantu abadala ababili bahlala mahhala.
Igumbi elikhululekile linemimoya yomoya, i-TV-screen screen eneziteshi zesathelayithi, idesksi, izindawo zokwenza itiye kanye nekhofi, kanye nefriji encane. Kukhona i-en-suite yangasese ene-shower kuphela. Amakhadi namabhede amabili atholakalayo ngesicelo (ngokuya kokutholakala).
Igumbi eliduze nomfula
Hlaziya esimweni samanje sanamuhla salesi Camelo Esibhekene Nesigumbi Esibucayi e-Sun City Cabanas. Igumbi linemibono ye-Waterworld Lake futhi ilala nabantu ababili, nemibhede emibili engaguqukela embhedeni owodwa ngesicelo.Hlaziya esimweni samanje sanamuhla salesi Camelo Esibhekene Nesigumbi Esibucayi e-Sun City Cabanas. Igumbi linemibono ye-Waterworld Lake futhi ilala nabantu ababili, nemibhede emibili engaguqukela embhedeni owodwa ngesicelo.
I-en-suite yokugezela ihamba ngewashi kuphela. Izici ezijwayelekile zihlanganisa isimo se-air, i-TV-flat screen eneziteshi zesathelayithi, indawo edeskini, itiye kanye nokwenza ikhofi, kanye nefriji encane.
Kuhlanganisiwe ekuhlaleni kwakho
Indawo yokudlela yasekuseni yesilungu egcwele yokudlela yasePalm Terrace
Ukufinyelela kwamahhala ku-Valley of the Waves
Izinsizakalo zokuthutha ezihambisanayo ngaphakathi kweSan City Resort
Ngaphambilini - Uhlolojikelele Okulandelayo - Indawo